China High voltaji USB rụpụta na Factory | Sunshow
Akwa voltaji waya
Igwe eriri dị elu bụ ụdị eriri ike, nke na-ezo aka na eriri ike nke a na-eji ebufe n'etiti 10kv-35kv (1kv = 1000v), a na-ejikarị ya eme ihe n'okporo ụzọ isi nke nnyefe ike. Implementationkpụrụ mmejupụta ngwaahịa maka eriri ọkụ dị elu bụ gb / t 12706.2-2008 na gb / t 12706.3-2008
Ofdị eriri eriri dị elu
Typesdị isi nke eriri ọkụ dị elu bụ eriri yjv, eriri vv, eriri yjlv, na eriri vlv.
yjv USB aha zuru ezu XLPE gwara mmanụ PVC sheathed ike USB (ọla kọpa isi)
Aha zuru ezu nke vv eriri bụ PVC nke a gwara mmanụ na eriri eriri ọkụ (isi ọla kọpa)
yjlv USB zuru aha XLPE gwara mmanụ PVC sheathed aluminum isi ike USB
VLV USB zuru aha PVC gwara mmanụ PVC sheathed aluminum isi ike USB
N'ihi ezigbo njikwa ọkụ eletrik nke ndị na-eduzi ọla kọpa, ọtụtụ na-arụ ọrụ na-eji eriri ike ọla kọpa dị ka isi okporo ụzọ nke usoro ọkọnọ ike, ebe a na-ejighị eriri igwe eletrik arụ ọrụ, ọkachasị na usoro ike ọkụ dị elu, họrọ isi ọla kọpa A na-enwe ọtụtụ eriri.
Ọdịdị nke eriri ọkụ dị elu
Ihe mejupụtara eriri USB nke dị elu site n'ime ruo n'èzí gụnyere: onye na-eduzi, mkpuchi, n'ọbọ dị n'ime, ihe nzacha (ihe agha), na mkpuchi mpụga. N'ezie, a na-ejikarị eriri ndị nwere voltaji na-ejikarị eme ihe maka ili ozu, nke nwere ike iguzogide mkpakọ dị elu na ala ma gbochie mmebi sitere na ikike ndị ọzọ.
Common nkọwa na ojiji
na-yjv, nb-yjv, XLPE a na-ekewapụta PVC nke a (b) enwere ike ịtọba n'ime ụlọ, tunnels na pipeline chọrọ nkwụsị ọkụ.
na-yjv22, nb-yjv22, XLPE a gwara mmanụ ígwè teepu armored ịkwanyere sheathed a (b) ọkụ na-eguzogide ike ọkụ adabara maka dina n'ime ala mgbe ọkụ na-eguzogide chọrọ, adịghị adabara itinye na pipelines.
na-vv, nb-vv, PVC kpuchie PVC nke a gwara mmanụ (b) enwere ike ịtọba n'ime ụlọ, tunnels na pipeline chọrọ nkwụsị ọkụ.
na-vv22, nb-vv22, ịkwanyere a gwara mmanụ ígwè teepu armored PVC sheathed ụdị a (b) ike ọkụ ọkụ na-eguzogide maka ịtọgbọ ala mgbe achọrọ nguzo ọkụ, ma ọ gaghị adabara itinye na pipelines.
wdna-yjy23, wdnb-yjy23, polyethylene jikọtara ya na polyethylene a kpụkọtara ya na polyolefin sheethed a (b) halogen-free low-anwụrụ ọkụ ọkụ na-eguzogide ike USB adabara maka dina n'ime ala mgbe halogen-free, obere-anwụrụ ọkụ na ọkụ a chọrọ nguzogide, adabara suitabletọ na pipeline.
za-yjv, za-yjlv, zb-yjv, zb-yjlv, zc-yjv, zc-yjlv, polyethylene jikọrọ cross-njikọ polyethylene mkpuchi sheathed a (b, c) ire ọkụ-retardant ike USB nwere ike tọgbọrọ na-abụghị nguzogide Fired n'ime ụlọ, tunnels na pipeline na chọrọ.
za-yjv22, za-yjlv22, zb-yjv22, zb-yjlv22, zc-yjv22, zc-yjlv22, cross-njikọ polyethylene gwara mmanụ ígwè teepu armored ịkwanyere sheathed a (b, c) ire ọkụ retardant ike USB adabara Ọ dịghị adabara maka ịtọgbọ na pipeline mgbe ị na-etinye ala mgbe ọkụ chọrọ ọkụ ọkụ.
za-vv, za-vlv, zb-vv, zb-vlv, zc-vv, zc-vlv, PVC gwara mmanụ PVC sheethed a (b, c) ire ọkụ-retardant ike USB nwere ike tọgbọrọ na oku-retardant Ime, tunnels na ọkpọkọ ebe achọrọ.
za-vv22, za-vlv22, zb-vv22, zb-vlv22, zc-vv22, zc-vlv22, ịkwanyere gwara mmanụ ígwè teepu armored ịkwanyere sheathed a (b, c) ire ọkụ retardant ike USB adabara aytọ n'ala mgbe ire ọkụ retardant achọrọ adịghị mma maka ịtọgbọ paịpụ.
wdza-yjy, wdza-yjly, wdzb-yjy, wdzb-yjly, wdzc-yjy, wdzc-yjly, cross-linked polyethylene gwara mmanụ polyolefin sheathed a (b, c) ire ọkụ-retardant ike Gịnị nwere ike tọgbọrọ ọkụ n'ime ụlọ, tunnels na pipeline ebe achọrọ halogen na obere anwụrụ ọkụ.
Polyethylene a na - ejikọ mmanụ a na - ahụ maka polyolefin a na - ejikọ aka na polyolefin sheethed a (b, c) eriri ọkụ na - enwu ọkụ na - adị mma maka ịtọba n’ime ala mgbe achọrọ ọkụ ọkụ, halogen na - enweghị anwụrụ ọkụ, ma adabaghị maka itinye na paịpụ. .
vv, vlv, ọla kọpa (aluminom) isi PVC a gwara mmanụ na PVC sheethed ike Gịnị na-tọrọ n'ime ụlọ, tunnels na ọkpọkọ ma ọ bụ n'èzí brackets, na ọ bụghị n'okpuru nrụgide na n'ibu agha.
vy, vly, ọla kọpa (aluminom) isi ịkwanyere gwara mmanụ na Pee sheathed ike USB
vv22, vlv22, ọla kọpa (aluminium) isi PVC akpọrọ ígwè teepu ejiri ihe mkpuchi PVC nke a na-agbanye ọkụ n'ime ụlọ, tunnels, trenchi USB na ala e liri ozugbo, eriri ndị ahụ nwere ike iguzogide nrụgide na ikike ndị ọzọ dị na mpụga
vv23, vlv23, ọla kọpa (aluminom) isi ịkwanyere gwara mmanụ ígwè teepu armored Pee sheathed ike USB
Njirimara eriri USB dị elu
Ngwaahịa a dabara adaba AC gosiri 35kv voltage na n'okpuru maka nnyefe na nkesa ike. Ogologo oge na-arụ ọrụ nke onye na-eduzi eriri ọkụ bụ ogo 90, na ogo kachasị nke onye na-eduzi eriri anaghị agafe nrịgo 250 mgbe a na-emegharị sekit (oge kachasị ogologo anaghị agafe 5s).
1kv na n'okpuru bụ eriri volta dị ala; 1kv ~ 10kv bụ ọkara voltaji Gịnị; 10kv ~ 35kv bụ eriri ọkụ dị elu; 35 ~ 220kv bụ eriri UHV;
UHV USB bụ ụdị ike USB nke pụtapụtara na mmepe na-aga n'ihu nke teknụzụ USB. A na-ejikarị eriri UHV eme ihe dị ka ebe etiti na nnukwu usoro nnyefe ike. Ọ bụ eriri ọkụ dị elu nke nwere ọdịnaya dị elu nke dị elu ma na-ejikarị eme ihe maka nnyefe ike dị anya.
Ihe na-akpata ọdịda eriri igwe eletrik dị elu
USB bụ akwa mmiri dị n’etiti ngwa ọrụ ike na akụrụngwa eletriki, wee rụọ ọrụ n’ibunye ike eletrik. A na-ejikarị ya, ya mere ọdịda na-emekarị. Ihe ndị a bụ nyocha dị mkpirikpi banyere ihe ndị na-akpata nsogbu nkịtị nke eriri ọkụ dị elu. Dabere na ihe kpatara ọdịda, a na-ekewa ha n'ụzọ dị iche iche: ebumnuche ndị nrụpụta, ihe eji arụ ụlọ, ihe eji emepụta ihe, mmebi mpụga ụzọ anọ.
Nke gara aga: Fluoroplastic USB
Osote: Optic Eriri USB
Ike USB 22
Optic Eriri USB